IDEA MAGAZINE: October 2009
ခဏခဏငိုပြရတာ မောတယ် ဒါပေမယ့် ခဏခဏ မောတယ်
ပြောရမှာ အရမ်းတေလေဆန်တယ် အိမ်ပြန်ချိန်လည်း မသိသေး
နေရာတကာ နောက်ကျမှုတွေနဲ့သာ ရှေ့ဆက် အိပ်ရေးတွေလည်း ပျက်ရင်းပျက်နေ
မိုးရေတွေထဲမှာ သောင်တင်နေသော အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေ ခမျာမှာ
တစ်နေ့နေ့တော့ တစ်နေ့နေ့ပေါ့လေ တစ်နေ့နေ့ကျ အသက်ရှူဝနိုင်ပါတယ်
လောလောဆယ် ကော်နက်ရှင်တွေမကောင်းဘူး ခဏခဏဒေါင်း(Down)ဒေါင်းသလို
စောင့်နေတဲ့ မှတ်တိုင်တွေ အကြောင်းမဲ့ ခဏခဏပြောင်းလိုပြောင်းနေတာ
ဟိုနေရာမှာ ကြားပြီးပြီလား ဒီနေရာမှာ ဟိုဟိုဒီဒီ နေရာစုံတွေဆီမှာ
ဒီလိုပါပဲကွာ ဒီလိုပါပဲကွာဆိုတာကိုကဒီလိုပါပဲ လိုရာသာဆွဲတွေးလိုက်တော့ဆို
အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာကလည်း အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ခြင်းပါပဲ တကယ်
မကြီးမငယ် မသေရုံတမယ် အဆင်ပြေရာပြေကြောင်း မီးစင်ကြည့်ပြီး က..... ဆို
ငိုချင်ရင်ငိုပစ်လိုက် အရှုံးတော့မပေးလိုက်ပါနဲ့လို့ နှုတ်ကတဖွဖွ ရင်ကတမမ
ဘာဆိုဘာမှ မသိချင်စမ်းပါနဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုသာ ဂရုစိုက်ကြ ခုရောက်နေတာ ရန်ကုန်
ဖြစ်ပုံတွေက အဖြစ်ကိုစုံလှတယ် အံ့လည်းအံ့ လန့်လည်းလန့်စရာ အမလေး
ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပြီး ဆက်သွယ်ဖို့က တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထင်သလောက်မလွယ်
မှားနေသော အမှားတွေက နွမ်းနေသော လမ်းပေါ်မှာ အုတ်ရောရောကျောက်ရောရော စုပြုံကျ
လူ့ဘ၀သံသရာကြောမှာ မကြာခဏနာရဖျားရ 96ပါးလည်း မက.... မလှ..... မပ...တော့လို့
ကိုယ့်ရှိမှကိုယ်ပဲ ဘယ်သူ့မှသနားမနေကြနဲ့ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ်သီချင်းကိုသာ အာပြဲအောင်ဆို
မုဒိတာတရားတွေက အူမမတောင့်နိုင်တော့လို့ ဘတ်စ်ကားတွေပေါ်မှာ တိုးကြဝှေ့ကြ
မွတ်သိပ်စွာနဲ့တစ်ယောက်စားနေဆဲ ထမင်းလုတ်ကို တစ်ယောက်က ပုတ်ချ ကြည့်နေရတာဆိုး
ဓါးမိုးပြီး ခြိမ်းခြောက်စရာမလိုတော့လောက်အောင် ယနေ့ခေတ်က ပညာရယ်ရွှေအိုးရယ်ခေတ်
နောက်တစ်ခါ ဒီကစားဝိုင်းထဲကို လာမယ်ဆိုရင် ငွေအတုတွေပဲ ယူနိုင်အောင်ယူခဲ့ကြ
နေ့နဲ့ညက တစ်သားတည်းကျအောင်မှောင်နေပြီမေမေရေ . .ရေပေးပါမေမေ ရေ.............
အရမ်းတေလေဆန်တယ် အိမ်ပြန်ချိန်လည်း မသိသေး....။ ။
ညဉ့်အ၀င်ရဲ့ နွေးမြမြအောက် ရပ်ထားတဲ့ကျွန်း
ကျွန်းကတော့ အုန်းလက်တွေလို ရိုးရာသံစဉ်တွေနဲ့က
ကျွန်းကတော့ဗုံသံတွေ ထက်မှာ ရိုင်းရိုင်းယိမ်းယိမ်းနဲ့က
ကျွန်းကတော့ မှုန်ဝါးဝါးမြူငွေ့ထဲက အကတွေ က
လက်တစ်ဖျစ်စာ စိတ်ကူးတွေ မတတ်မြောက်ခင် မြို့ရိုးတွေနစ်ခဲ့။
သိုးယောင်ဆောင်ကုလားအုပ် ပြုစားခံသစ်သီးနဲ့ ဆုတောင်းသံ မရှိတဲ့ည
အရောင်မဲ့မိုးစက်တွေ ရနံ့ပြယ်ပန်းတွေ ကြယ်တွေနဲ့အတူမျှော . . .
သက်ရင့်ကျောက်တွေ မရှိဘူး . . .(အဟောင်းတွေ ရစ်ပတ်နေ အလေ့အထတစ်ခု)
ဖယောင်းတိုင်တွေ မရှိဘူး . . . (အရာရာကို ပျော်ဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးစား စ နစ် တ ကျ)
ပိုးစုန်းကြူးတွေ မရှိဘူး . . (လရောင်ကို ဖမ်းပြီး ထွန်းတဲ့ မီးအိမ်ကိုင်လက်တစ်စုံ)
စကားသံတွေ မရှိဘူး . . . (တိတ်-ဆိတ်×
သူ့အဖော်တွေလာမှ လရောင်စုံနဲ့ တစ်ကျွန်းလုံးထွန်းလို့
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငါးမျှားချိတ်မှာ မမိခင်အထိ။ ။
Filed under idea poem corner - oct'09 1 comments